Nhazi | December 2019
Okpokorita oru nke ndi nhazi site na ndi nnocha di iche iche
Okpomọkụ na-arụ ọrụ nke ọma maka ihe ọ bụla na-arụ ọrụ (n'agbanyeghị ma ọ bụ emeputa) dị ruo 45ºC na ọnọdụ nkwụsị na ruo 70ºC na arụ ọrụ. Otú ọ dị, ụkpụrụ ndị a dị oke ụba, n'ihi na emeghị afọ emepụta na teknụzụ ndị a. Dịka ọmụmaatụ, otu CPU nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na okpomọkụ nke ihe dị ka 80ºC, na ọzọ, na 70ºC, ga-agbanwe gaa na obere ala.
Mee ka nhazi arụmọrụ dịkwuo elu
Ugboro ugboro na arụmọrụ nke nhazi ahụ nwere ike ịdị elu karịa akọwapụtara na nkọwa ndị a kapịrị ọnụ. Ọzọkwa, ka oge na-aga, iji arụ ọrụ arụ ọrụ niile nke PC (RAM, CPU, wdg) nwere ike ịdaa nke ọma. Iji zere nke a, ọ dị mkpa ka ị "ebuli" kọmputa gị mgbe niile.
Ụkpụrụ nke ọrụ nke nhazi kọmputa nke oge a
Nhazi usoro bụ isi na ihe kachasị mkpa nke usoro ahụ. Ekele ya, a na-arụ ọrụ niile metụtara nnyefe data, mkpochapụ iwu, arụmụka ezi uche na arụmụka. Ọtụtụ ndị ọkachamara maara ihe CPU bụ, mana ha anaghị aghọta otú o si arụ ọrụ. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịkọwa n'ụzọ doro anya na CPU na kọmputa na-arụ ọrụ nakwa maka ihe.
Ịwụnye processor na motherboard
N'oge mgbakọ nke kọmputa ọhụrụ, a na-ebute ihe nhazi ahụ na motherboard ozugbo. Usoro ya dị oke mfe, mana enwere nuances dị iche iche nke ị ga-agbaso iji ghara imebi ihe ndị ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha nyocha ọ bụla nke na-arịba CPU na motherboard.
Anyị na-amata oghere nhazi
Oghere bụ njikọ pụrụ iche na motherboard ebe a na-arụ ọrụ nhazi na usoro ntụrụndụ. Kedu ụdị onye nhazi na onye nchịkwa ị nwere ike iwunye na motherboard dabere na oghere. Tupu ị dochie onye nlekota na / ma ọ bụ nhazi, ịkwesịrị ịma kpọmkwem nkwụnye ị nwere na motherboard. Otu esi amata oghere CPU Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ mgbe ịzụrụ kọmputa, motherboard ma ọ bụ nhazi, ị nwere ike ịchọpụta ihe ọ bụla gbasara kọmputa ma ọ bụ akụkụ ya (ma ọ bụrụ na enweghị akwụkwọ maka kọmputa dum).
Ịhọrọ onye nlekota oru maka nhazi
Iji mee ka usoro ahụ dị jụụ, a chọrọ onye nlekota oyi, akụkụ ya ga-adabere n'otú ọ ga-esi dị mma na ma CPU agaghị agafe. Iji mee nhọrọ ziri ezi, ịkwesịrị ịmara akụkụ na njirimara nke oghere, processor na motherboard. Ma ọ bụghị ya, enwere ike idozi usoro nsogbu ahụ na-ezighi ezi na / ma ọ bụ mebie motherboard.
Otu esi achọpụta ọgbọ profaịlụ Intel
Intel na-emepụta microprocessors kasị ewu ewu n'ụwa maka kọmputa. Kwa afọ, ha na-atọ ụtọ ndị ọrụ nke ọgbọ ọhụrụ nke CPU. Mgbe ịzụrụ PC ma ọ bụ dozie njehie, ọ ga-adị mkpa ka ị mara ọgbọ nke gị nhazi. Nke a ga-enyere aka na ụzọ ole na ole dị mfe.
Otu esi achọta ugboro ole nhazi
Ịrụ ọrụ na ọsọ nke usoro a na-adabere na ike ugboro ugboro. Ngosipụta a anaghị adịgide adịgide ma nwee ike ịdịgasị iche n'oge ọrụ nke kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na ọchọrọ, onye nhazi ahụ nwere ike ịbụ "ihe kpuchie", si otú a mụbaa ugboro ole. Ihe omumu: otua esi kpochie ihe nhazi gi I nwere ike ichoputa ugboro ole na ole site na iji usoro di iche iche, tinyekwa ojiji nke ndi ozo.
Gbanwee ihe nhazi ahụ na kọmputa
Na-agbanwe CPU na kọmputa ahụ nwere ike ịdị mkpa maka ọdịda na / ma ọ bụ ọdịdị nke isi nhazi. N'okwu a, ọ dị mkpa ịhọrọ ngbanwe edozi, yana jide n'aka na ọ dabara na njirimara niile (ma ọ bụ ọtụtụ) nke motherboard gị. Hụkwa: Otu esi họrọ onye nhazi Ọ bụrụ na ịhọrọ mama nne maka nhazi ọ bụla Ọ bụrụ na nne na nna na nhazi ahụ zuru ezu, i nwere ike ịga n'ihu.
Mee ka ngwa ngwa ngwa nju oyi di na nhazi
Site na ndabara, onye nlekota na-agba ọsọ n'ihe dị ka 70-80% nke ikike nke onye nrụpụta wuru n'ime ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-edozi onye na-eme ihe ngwa ngwa na / ma ọ bụ na e meburu ya na mbụ, a na-atụ aro ka ị gbasaa ọsọ nke ntụgharị nke mfụgharị ahụ na 100% nke ikike nwere ike. Ọganihu nke eriri nke ngwa nju oyi anaghị enwe ihe ọ bụla maka usoro ahụ.
Ngwọta nke nsogbu ahụ "Onye ọrụ nhazi ngwa ngwa Windows na-ekenye ihe nhazi ahụ"
A haziri usoro nhazi ọrụ (a makwaara dị ka TiWorker.exe) iji wụnye mmelite ntanetịime dị na ndabere. N'ihi ya kpọmkwem, os nwere ike ịdị oke nrụgide maka os, nke nwere ike ime ka mmekọrịta ya na Windows ọbụghị na-agaghị ekwe omume (ị ga-agbanyeghachi os). Ọ gaghị ekwe omume ihichapụ usoro a, n'ihi ya, ị ga-achọ ihe ngwọta ọzọ.
Ihe arụmọrụ AMD FM2
N'afọ 2012, AMD gosipụtara ndị ọrụ ndị ọhụrụ na-eme ka a mara ọkwa FM2 nke dị na TVenamed Virgo. Nhazi nke ndị nhazi maka oghere a dị nnọọ ukwuu, na n'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe "a ga-etinye" nkume na ya. Nhazi maka oghere FM2 A na-atụle ọrụ kachasị elu nke a na-enye n'elu ikpo okwu dịka ojiji nke ndị nrụpụta ngwakọ ọhụrụ, nke a na-akpọ APU site n'aka ụlọ ọrụ ahụ ma na-enwe ya na-emepụta ọ bụghị naanị na-emepụta ihe, kama ọ bụkwa ndị na-ese foto dị ike maka oge ndị ahụ.
Ihe mere CPU Control anaghị ahụ usoro
CPU Control na-enye gị ohere ikesa na ebuli ibu na cores processor. Usoro sistemụ anaghị arụ ọrụ mgbe niile, ya mere mgbe ụfọdụ usoro a ga-aba uru. Otú ọ dị, ọ na-eme na CPU Control adịghị ahụ usoro. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga - esi wepụ nsogbu a ma nyefee nhọrọ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe nyeere gị aka.
Gịnị ma ọ bụrụ na SVCHost na-ebu ihe nhazi 100%
SVCHost bụ usoro maka oke nkesa nke mmemme na ngwa ndabere, nke nwere ike ibelata ibu na CPU. Ma ọrụ a anaghị arụ ọrụ mgbe niile, nke nwere ike ime ka ibu dị elu na cores processor n'ihi ike mgbachi.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ngwanrọ ọrụ nchedo ọrụ na-ebu ihe nhazi
Ụfọdụ ndị nwe Windows 10 sistemụ arụ ọrụ na-eche nsogbu dị otú ahụ ihu na ọrụ nchebe software na-ebute ihe nhazi ahụ. Ọrụ a na - ebute njehie na arụ ọrụ kọmputa, ọtụtụ mgbe ọ na - eburu CPU. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya ọtụtụ ihe kpatara nsogbu a ma kọwaa otu esi edozi ya.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na Usoro usoro na-ebu ihe nhazi ahụ
Windows na-eme ọtụtụ usoro nhazi, ọ na-emetụtakarị ọsọ nke usoro nkwụsị. Ọtụtụ mgbe, ọrụ "System.exe" na-ebute ihe nhazi ahụ. Disable ya kpam kpam, n'ihi na ọbụna aha n'onwe ya na-ekwu na ọrụ ahụ bụ usoro. Otú ọ dị, e nwere ụzọ dị iche iche dị mfe iji nyere aka belata arụ ọrụ nke usoro System na usoro.
Ụlọ ọrụ AMD na-eme ka ndị nhazi na-enwe ohere zuru oke iji nweta nkwalite. N'ezie, CPU si na emeputa a bụ 50-70% nke ezigbo ikike ya. A na-eme nke a iji hụ na nhazi ahụ dịruru ogologo oge o kwere mee nakwa na ọ gaghị ekpuchi ya mgbe ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị na-adịghị mma.
Otu esi belata ọsọ nke ngwa nju oyi na nhazi
Ngbanwe ngwa ngwa nke ube nke ngwa ngwa nju oyi, ọ bụ ezie na ọ na-eme ka ahụ dịkwuo mma, Otú ọ dị, nke a na-esonyere ụda mkpọtụ, bụ nke na-adọpụ mgbe ụfọdụ site na ịrụ ọrụ na kọmputa ahụ. N'okwu a, ị nwere ike ịnwa ibelata obere ọsọ nke ngwa nju oyi, nke ga-emetụta mmetụta dị jụụ, ma ọ ga-enye aka belata ọkwa ụda.
Igbanye usoro "usoro na-abaghị uru"
"Njikwa usoro" bụ usoro iwu na Windows (malite na 7th version), nke ụfọdụ nwere ike ibudata usoro ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ele Task Manager, ị nwere ike ịhụ na usoro System System na-erepịa ọtụtụ ihe onwunwe kọmputa. N'agbanyeghị nke a, onye na-eme ihe na-adịghị ngwa ngwa nke PC "Njikwa Ọrụ" dị nnọọ obere.
Idozi nsogbu na iji CPU na-enweghị isi
Ọtụtụ mgbe kọmputa na-amalite ịkụlata n'ihi na iji CPU. Ọ bụrụ na ọ na - eme na ibu ya ruru 100% n'ihi enweghị ihe kpatara ya, mgbe ahụ, e nwere ihe mere ị ga - eji nwee nchegbu na mkpa dị ngwa iji dozie nsogbu a. E nwere ọtụtụ ụzọ dị mfe ga-enyere ọ bụghị naanị ịmata nsogbu ahụ, kamakwa dozie ya.